शब्द Archives - विवेचना
मायाका झुटा कथा
कञ्चन ओझा ‘स्मोकिङ छोड्दा नि त्यो सिग्रेटको माया ला’को होला है, तिमीलाई ! तर, मबाट टाढा हुँदा मेरो अलिकति पनि माया लागेन नि ?’ भन्दै जोरसँग फोनमै कराउँछे ऊ । फोनको अर्को किनारमा थियो, समीर । जो उसको त्यत्रो ठूलो स्वरलाई सुनेर नि बडो शान्तपूर्वक केही नबोलेर धैर्य धारण गरी सुनिरहेको थियो । …
कोमल सुब्बा दसैँ आउनु अझै एक महिना थियो । हामी सानासाना केटाकेटी दसैँ कहिले आउने भनी दिन गन्दै बसेका थियौँ । मेरो दाजुले त कोइला स्टाइलको कोट लाउँछु भनेर आमालाई वाक्कै पारिसकेको थियो । आमाले पनि बोनस पाएपछि आफूसँगै हरि भैयाको दोकानमा लगेर लुगा किनिदिने वचन दिएकी थिई । कुरा आइतबारको हो । आमा, मेरो …
नगरपालिका खुला दिसामुक्त घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा बिर्तामोडमा दिपावली
बिर्तामोड, भदौ ७ । झापाको आठौँ स्थानीय तह र चौथो नगरपालिकाको रुपमा खुला दिसामुक्त घोषणाको तयारी गरिएको बिर्तामोड नगरपालिकामा घोषणा पूर्वसन्ध्यामा दिपावली गरिएको छ । नगरपालिकालाई यही भदौ ८ गते बिहान ११ बजे अग्रसेन भवनमा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाले तय गरेको छ । बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले …
राजेश नतांश रुपा नामले मात्र होइन वास्तविक रुपमा नै निकै राम्री थिई । काली-काली हिस्सी परेकी, सलक्क परेको जिउडाल र यौवनले भरिपूर्ण शरीर भएकै कारणले होला गाउँका सम्पूर्ण युवकहरु रुपा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने गर्दथे । रुपालाई आकर्षित गर्नका लागि मञ्चित नाटकहरु हेर्न निक्कै रोमाञ्चकारी हुने गर्दथ्यो । उनीहरुले रुपालाई लोभ्याउनका लागि गरको सहयोग …
अनिल सौगात शर्मा जीवनलाई यसरी पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ कि – यात्रा अगाडि बढाउने क्रममा हामी दुई वटा बाटाहरुमा जहिल्यै पनि केन्द्रित भएका हुन्छौँ र अल्मलिएका पनि । जहिल्यै दुई बाटो आएपछि एउटा छान्नु पर्ने हाम्रो बाध्यतालाई आज आएर विज्ञानले यति सरल बनाइदिएको छ कि हामी दुवै बाटोलाई आत्मसात् गरेर लान …
दमकमा दुई कृतिको लोकार्पण
दमक, असार १७ । झापाको दमकमा शनिबार दुईवटा साहित्यिक कृति लोकार्पण गरिएको छ । प्रतिभा निकेतनले प्रकाशित गरेको १५ औँ समसामयिक अंक र पाँचथरकी गजलकार रचना लावतीले लेखेको ‘स्मृति’ नामक गजलसंग्रह छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गरिएको हो । दमक बहुमुखी क्याम्पसमा प्रतिभा निकेतनले एक कार्यक्रम गरी कृतिको लोकार्पण र्गयो भने शब्द खिमले दमकचोकको …
एउटा अन्तिम प्रेमपत्र
शिव बस्याल युटेनको विवाहपश्चात मेरो बाँच्ने रहर मरेर जान थाल्यो । प्रत्येक पलपलमा युटेनको यो आखिरी म्यासेज हेरिरहन्थेँ । हजारौँपटक पढेँ, तर जतिपटक पढे पनि मेरो लागि सुनौलो लाग्दथ्यो । आखिर म्यासेज लेख्दा युटेनका आँखा पक्कै पनि कति रोए होलान् । मनमा उब्जिएका हजारौँ प्रश्न मैले याद गर्न पनि नसक्ने भएँ । छिनभरमै सोचेका कुरा …
साम्प्रदायिक सद्भाव र मेदनीप्रसाद कन्दङ्वा
सरोज ओली वि.सं. २००७ को राणा विरोधी क्रान्ति त सबैलाई थाहै छ । त्यो क्रान्तिको रूप मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रुपले देखिन पुग्यो । त्यो बेला अहिलेका तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा र सोह्रबासमा आदि सबै जिल्ला धनकुटा जिल्ला अन्तर्गत पर्दथे । धनकुटाका तत्कालिन बडा हाकिम लोचन शम्सेर राणाले पल्लो किरातका लिम्बूहरूका नाम केलाई …